Top 5 Undelete kale oo lagu daray Softwares daaqadaha
Top 5 Softwares Undelete daray kale oo ku xiran Mac
Waxaan dhamaanteen leenahay xog muhiim ah kaydiyaa laptops iyo kombiyuutarada iyo khasaaraha lama filaan ah xogta noqon karaa mid aad geeri iyo jeer. Data noqon kartaa files ganacsiga, files warbaahinta ee foomka of sawiro iyo videos ama wax files kale. Si kastaba ha ahaatee, labada Windows iyo Mac siin heshiis weyn ee ilaalinta xogta iyo khasaaro xogta ma aha mid aad joogto ah. Xaaladaha yimaadaan waxaa laga yaabaa in marka aan waayin dhamaan xogta iyo sidaa darteed, kuwaas oo qalab soo kabashada xogta kaa caawinaysaa in aad dib u hesho xogta aad ka hor inta aanay weligood ka dhammaatay.
NTFS Undelete Barnaamijka
NTFS Undelete waa (barnaamijka) codsi ah in kuu ogolaanayaa inaad undelete faylasha aad lumay qaab aad u fudud oo si sahlan. NTFS codsiga Undelete si fudud u soo celin kartaa dhammaan noocyada kala duwan ee files ka qalabka isticmaala NTFS ama nidaamyada file baruurta. Waxa kale oo la shaqeeya dhammaan noocyada warbaahinta saari karo sida drives suulka USB iyo kaararka SD.
Barnaamijka waxaa soo kabanayo files tirtiray ka wadid aad u adag, xataa ka dib marka aad soo ururiyeen oo aad recycle bin.
Waxaa files undelete aad si fudud oo dhaqso.
Waxa ay taageertaa dhammaan noocyada file iyo kordhin.
Ma la socon karaa kaararka SD iyo drives USB.
1. Waxa ay taageertaa Windows XP, Vista, 7, 8, 2003 Server, iyo Server 2008 taas oo muujinaysa waxa ay leedahay boosteejo ah oo waaweyn.
2. Waxay qaadataa oo keliya dhowr daqiiqo inuu ka soo kabsado aad files lumay.
3. Waxa ku taxan ee files soo kabsaday iyo sanamyo la magac, xaaladda, size, jidka, taariikhda abuuray iwm taas oo ka dhigaysa in ay aad u fududahay in ay kala files.
1. qayb ka mid ah aqoon farsamo oo loo baahan yahay in ay ku shaqeeyaan software sida aqoonta kordhin file iwm
Qaybta 1aad Softwares Top 5 Undelete daray kale oo daaqadaha
Wondershare Data Recovery Waa qalab la yaab leh la heli karo si lagaaga caawiyo in aad soo kabsado files in ay ahaayeen shil ahaan tirtiray ama laga badiyay si kale. Waxay bixisaa fursado badan oo ay ku soo kabsadaan faylasha iyo xogta laga badiyay. Waxa ay taageertaa badan files oo waxaa loo arkaa sida software ugu wanaagsan ee dib u soo kabashada xogta maanta laga heli karo.
1. Waxa ay taageertaa iyo kabanayso ka badan 550 nooc ee files.
2. Waxay u baahan tahay shuruudaha nidaamka ugu yaraan marka la barbar dhigo Softwares kale.
3. Waxaa soo kabanayo xogta aad si hufan iyo jidkii aad u fudud oo deg deg ah.
1. version buuxda la bixiyo oo halkan ka version xorta ah ayaa qaababka aad u yar.
Qiimeynta iyo dib u eegidda
Rating Celceliska: 4.5 out of 5 stars.
Recuva waa user daaqadaha saaxiibtinimo qalab kabashada xogta loo isticmaalaa in lagu soo kabsado ka maqan oo laga badiyay files. Waxay kaa caawinaysaa in aad soo koobto nooca raadinta si aad u sawiro, music, waraaqaha, video iyo faylasha kale. Waxa kale oo isticmaala jaalaha ah nidaam cagaaran / / casaan khafiif ah si ay u muujiyaan suurtogalnimada uu soo kabashada ee files aad.
1. Waxa ay u qabata raadinta aad u qoto dheer si aad u ogaato faylasha aad tirtiray.
2. Waa user saaxiibtinimo oo kuu ogolaanaya in aad si tayo leh koobto raadinta.
1. software wuxuu qaadanayaa waqti dheeraad ah si ay u soo kabsadaan xogta lumay marka la barbar dhigo Softwares kale.
Rating Celceliska waa 4 out of 5 stars.
Waa mid ka mid ah Softwares ugu wanaagsan ee la heli karo in ay tirtirto files kac tirtiray ka nidaamka. Waxay leedahay geynta degdeg ah oo hufan in browses, baadhitaanno iyo dib u soo celineysa files aad si hufan.
1. Waxa uu la ogolaan in Files qalab ikhtiyaar in si ammaan ah tirtiri kartaa files ka baxsan kabashada.
2. Waxa ay soo kaban karto, files in lagu tirtiray Recycle Bin iyo sidoo kale ka drives adag, drives kumbiyuutarka, drives USB iyo kamaradaha digital.
1. Waxaa wajahaya dhibaato halka kabsaday nooca jpeg faylasha taas oo khasaare weyn ee software-ka.
Ratings Celceliska waa 3.8 out of 5 stars.
4. falsan Data Recovery
Waa aalad aad u fudud kabashada xogta la heli karo kabsaday aad files lumay. Waxay leedahay interface aad u fudud iyo fursadaha menu yar adag iyo sanduuqyada wada hadal. Waxaa la shaqaysaa labada baruurta iyo NTFS nooc ka mid ah nidaamka.
1. Waxa uu aad u fudud user interface saaxiibtinimo waqti kabashada degdeg ah.
1. Waxa aanu u taageeraan dib u soo kabashada file u drives USB.
2. Free version waa shaqsiyaad ah kaliyah isticmaalaayo heli karo.
Kabashada Barzakh 5. Mini Tool
Mini Tool Recovery ah Barzakh, waa software kabashada xogta lacag la'aan ah oo laga heli karo in ka caawisaa soo kabsado tirtiray, drives luma ama waxyeelo iyo qoruhu on Windows, ka dibna waxay ka caawisaa inuu ka soo kabsado xogta iyaga ka. Waxa ay taageertaa drives adag, drives USB iyo cayn kasta oo drives kale flash.
1. Waxa ay taageertaa tiro badan oo ka mid ah nidaamyada sida bixisaa disk, Sata disk, SCSI disk iyo saari disk, FAT12 taageeraya, FAT16, FAT32, VFAT, nidaamyada file NTFS iyo NTFS5.
2. Waxa ay taageertaa tiro badan oo ah qaabab file iyo kordhin.
Rating Celceliska waa 4.8 out of 5 stars.
Part 2 Top 5 Undelete daray Softwares kale oo ku xiran Mac
Rating Celceliska waa 4.5 out of 5 stars.
Mini Tool Mac Data Recovery waa software ah soo kabashada xogta lacag la'aan ah dadka isticmaala Mac heli karaa taas oo ka caawisa soo kabsado tirtiray, luma ama drives iyo qoruhu on Windows, ka dibna waxay ka caawisaa inuu ka soo kabsado xogta iyaga ka. Waxa ay taageertaa drives adag, drives USB iyo cayn kasta oo drives kale flash.
1. Waxa ay taageertaa tiro badan oo ka mid ah nidaamyada sida HFS +, baruurta 16/32 iyo nidaamyada file NTFS.
Disk dagaalyahan waa mid ka mid ah software ka soo kabashada xogta caan ah oo isticmaala Mac heli karo maanta. Mid ka mid ah ugu feature soo jiidasho of software tani waa ay interface user u fiican. Waxaa loo isticmaali karaa si ay u soo ceshano photos, videos, waraaqaha iyo qaar badan.
1. Waa software sare iyo sidoo kale soo kaban karto, xogta laga guuldareysteen drive.
2. Waxaa bandhigayaa buugga ayna index u drive kasta.
3. Waxaa aad si degdeg ah oo lagu kalsoonaan karo.
1. Shuruudaha software waxoogaa dheeraad ah oo ku adag tahay marka la barbar dhigo kuwa kale.
Rating Celceliska waa 4.2 out of 5 stars.
4. gaardi digsi
Daloolin Disk waa software ah oo xog kabashada in si fudud ilaaliya files ka tirtirka shil iyadoo la kaashanayo wareegga soo kabashada iyo retrieves dib uga disk xogta ka. Waxa ay taageertaa nidaamka file sida HFS, HFS +, NTFS iyo baruurtii 32 nidaamyada. Waa aalad aad u awood badan.
1. Waxa uu leeyahay nidaam socodka SMART awood leh oo kaa caawinaysaa in aad si ay ula socdaan xaaladda aad disk adag iyo khatarta ka iman karta wax ka baaqsadey.
2. kaabta la abuuri karaa file image oo lagu rakibayaa karaa waqti dambe ee loogu soo kabashada xogta.
1. Waxay qaadataa waqti dheer inay ka soo kabsadaan files marka la barbar dhigo qalabka kale ee soo kabashada.
Rating Celceliska waa 3.8 out of 5 stars.
Waa aalad kabashada xogta weyn diyaar u isticmaala Mac maanta oo waa aalad kabashada xogta aad u wanaagsan oo u ogolaanaya in ay soo kabsadaan 500 GB xogta mar. Waxay leedahay 6 qaybood oo kala duwan oo soo kabashada xogta oo kaa caawinaysaa in aad si fudud u soo kabsado xogta aad laga badiyay.
1. Lix hababka kala duwan ee soo kabashada xogta iyo fursadaha xijaab.
2. Waa user saaxiibtinimo iyo fududahay in la isticmaalo.
1. Waa yara weyn loola jaban $99.25 tartanka guriga. Oo sidaas waa ka dhigaysa software ah oo kharash badan marka la barbar dhigo Softwares kale.
> Resource > bedelan karo > Top 10 NTFS kale oo Undelete on Windows iyo Mac